Fanadaharanasa ankapoben'ny fanjakana :: Nivoaka amin’ny antsipiriany ary itakiana vokatra mivaingana ireo veliranon’ny Filoha • AoRaha
Fanadaharanasa ankapoben’ny fanjakana Nivoaka amin’ny antsipiriany ary itakiana vokatra mivaingana ireo veliranon’ny Filoha
Asa goavana no miandry ny governemanta. Navoaka ho fantatry ny besinimaro, omaly, ny fandaharanasa ankapoben’ ny fanjakana. Anjaran’ny governemanta ny fanatanterahana azy satria miandry vokatra azo tsapain-tanana ny vahoaka.
Teboka voalohany ny fiahiana ny fandriampaha- lemana sy ny filaminana. Laharam-pahamehana ny fametrahana ny tany tan-dalàna sy ny fiantohana ny filaminana ao anatin’ ny fotoana maharitra. Misongadina ny fametrahana mpitandro ny filaminana amin’ireo lalam-pirenena isaky ny 150 km. Hisy ihany koa ny fanaparitahana an’ireo vondron-tafika manokana amin’ ireo faritra mena manerana an’i Madagasikara. Nohamafisin’ny Filoha Andry Rajoelina ao anatin’ ity fandaharanasa ity ny fampitaovana angidim-by sy ireo fitaovam-piadiana hoentina miady amin’ny dahalo sy ny asan-jiolahy, na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra.
Voafaritry ny velirano ihany koa ny fanovana ny fomba fiasa eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana. Ny fananganana sy fanavaozana an’ireo fonja eto Madagasikara, ny famerenana ny fonja mamokatra hahafahan’ ireo voafonja miverina tsikelikely eo amin’ny fiarahamonina. Misy tsindrim-peo manokana kosa ny momba ny famaizana an’ireo mpiasam-panjakana na manampahefana ambony tratra amin’ny fanaovana kolikoly. Sokajiana ho heloka bevava avy hatrany izany.
Mizara teboka maromaro indray ny fiahiana ara-tsosialy voasoratra ao anatin’ity fandaharanasa ankapoben’ny fanjakana ity. Hisy ny fametrahana rafitra hisahana ny fiahiana ny fahasalaman’ny zaza latsaky ny dimy taona sy ny reny mitondra vohoka ary ireo olon-dehibe mihoatra ny 55 taona. Tokony ho maimaim-poana ny fitsaboana ho an’ireo sokajin-taona ireo.
Hisy ihany koa ny fandefasana fiara misy an’ ireo fitaovana hahafahana mitsabo any amin’ireo toerana lavitry ny tanàn-dehibe.
Mikasika ny fanabe- azana kosa dia hampidirina tsikelikely ao anatin’ny fandaharam-pianarana ny taranja miorina amin’ireo sehatrasa haha matihanina an’ireo tanora. Eo koa ny fanorenana an’ireo trano mora miisa dimy alina, ny fanorenana an’ilay tanàn-dehibe « Tanamasoandro » , ny fampitomboana an’ ireo sehatra samihafa hahafahan’ireo tanora miasa sy mamorona orinasa ho azy. Hanokanana teti-bola izany.
Ho an’ny sehatry ny fambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia hampitomboina 100 000 ha ireo tany azo volena, ankoatra ny fampirobo- roboana ny fambolena zana-kazo hamerenana ny maha Nosy maitso an’
Fikasan’ny fitondram-panjakana ny hamaritra ny sata sy ny fahefana ho an’ireo governora hitantana an’ireo Faritra eto Mada- gasikara. Afaka manolotra sy manatanteraka ny tetikasa ao amin’ny faritra iadidiany ireo governora ireo. Hanana tetibola manokana sy fitaovana hahafahana manamboatra fotodrafitrasa ny governora, ary hisitraka ny tamberim- bidy 5 isan-jato amin’ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany misy ao aminy.
Tsy hadinon’ny Filoham-pirenena ny famaritana an’ireo fandaharanasa amin’ny fanandratana ny kolon-
tsaina malagasy. Efa nambarany ny fanarenana ny Rovan’i Manjakamiadana sy ireo vakoka hafa mila fanamboarana. Fantatra kosa fa hanorina akademia nasionaly momba ny zava- kanto sy ny kolontsaina ny fanjakana.
Voasoratra ny fanomezan- danja ny fanatanjahantena, ka hajoro ny akademia nasionaly. Homena vatsim- pianarana ireo atleta mendrika. Eo ihany koa ny fananganana lapan’ny Fanatanjahantena sy dobo filomanosana olimpika toy ireny any ivelany ireny.
Fandaharan’asa iandrasan’ ny Filoham-pirenena vokatra haingana ireo nosoritany ao anatin’ny velirano telo ambin’ny folo ireo. Efa nolazainy nandritra ny fitsidihany tany amin’ny faritra atsimon’ ny Nosy fa « afaka enim-bolana ihany dia efa hisy ny fitsarana ny asan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta raha maha- tanteraka na tsia an’ireo fandaharanasa ireo ».
Amin’ny alatsinainy izao no hampahafantatra sy hanazava an’ity fandaharanasa ankapobeny ity eo anoloan’ ireo mpikambana eo anivon’ny parlemanta ireo mpikambana ao amin’ny governemanta.
Mananika ny arivo ireo nifindran’ny « Covid-19 »
Fanitsiana teti-bolam-panjakana Nadinin’ny Filoha tsirairay ireo minisitra
Haiady taekwondo Hanana solontena amin’ny « Mondial » ampitain-davitra i Madagasikara
Fiainan’ny tantara an-dapihazo :: Zavakanto mandalo fotoan-tsarotra ny teatra malagasy
Fankasitrahana :: Voafidy ho mpanakanton’ny taona 2018 i Shyn sy Tence Mena